Global Voices teny Malagasy » Mitondra Fifaliana Ao Islamabad Ny Zavakanto Sy Ny Mozika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Desambra 2017 20:47 GMT 1	 · Mpanoratra Annam Lodhi Nandika nirinandrea
Sokajy: Pakistana, Mediam-bahoaka, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina
Mpivarotra mijoro manoloana ny asatanany tao amin'ny Tsenaben'ny Zavakanto langar tao Islamabad, Pakistan. Sary nalain'i Annam Lodhi, nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Tanàna tia filaminana i Islamabad. Matetika malalaka ny arabe ao an-drenivohitr'i Pakistana ary mangina ny làlana aorian'ny amin'ny 9 ora alina. Kanefa, tamin'ny volana lasa iny, nikorontana be ihany ny tao an-drenivohitra sy ny tanàna rahavaviny, Rawalpindi, ny teny an-dalambeny. Ireo mpikambana ao amin'ilay Fikambanan'ny Mpitondra fivavahana mpanao politika dia nikarakara fitorevahana naharitra volana iray izay nahatonga fikorontanana sy fifandonana tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana.
Voasakana tanteraka ny lalana miditra ao an-drenivohitra nandritra ilay hetsi-panoherana, toy izay koa ny lalana mampifandray ireo tanàna rahavavy. Tsy ilaina angamba ny milaza fa nanova ny fiainan'ny maro ny korontana ara-politika misy ao an-toerana. Kanefa, ilay fetiben'ny mozika nisy vao tsy ela akory izay, antsoina hoe Art Langar (Zavakanto Langar) dia namerina nitondra indray ny fifaliana tanatin'ny fotoanan'ny korontana ara-politika.”efa zatra an'izany izahay” , hoy i Nawal Mannan, mpianatra taotrano tonga nanatrika ilay hetsika, notanterahina ny faran'ny herinandro voalohany ny volana desambra tao Islamabad.
Ny Zavakanto Langar dia noforonina avy amin'ilay Sufi urs festival (Fetiben'ny Sufi), izay mazàna atao any amin'ireo toerana masina hankalazàna ny tsingerintaonan'ny nandalovan'ny Olomasina Sufi, ary ankalazain'ireo mpitia azy amin'ny alàlan'ny mozika, poezia ary sakafo. Sab ka bhala Sab ki khair, na ny fandavantena sy ny vaovao mahafaly ho an'ny rehetra, io no teny filamatra tamin'izany.” Ny hevitra ambadik'ilay hetsika Zavakanto Langar dia ny hamerina ho an'ny olona. “Ny tanjona dia ny hanome hanina ireo noana, na ny fanahy io, na ny fo sy ny kibo”, hoy i Arieb Azhar, mozisiana Pakistane sy ilay lehilahy miasa any ambadiky ny sehatra.
Feno haingo artistika nataon'ireo mpianatra avy amin'ny Oniversite nasionaly isan-karazany tao amin'ilay fetibe, fampirantiana maro izay mivarotra asatanana avy amin'ny faritra maro ao Pakistana, ary talantalana ahitàna sakafo isan-karazany. Afondasy sy mozika handaniana ny alina no hita eo anivon'izany rehetra izany. Olona efatra arivo mahery avy amin'ny salan-taona sy avy amin'ny lafy valon'izao tontolo izao no nanatrika izany fetibe izany.
Tarika maherin'ny roampolo no niaka-tsehatra nandritra ilay fetibe, nisolo tena ny mozika avy amin'ireo foko sy faritra manerana an'i Pakistana. Nanatrika ilay Lanonambe i Madiha Hamid, manampahaizana manokana momba ny aretin-tsaina ary nibitsika mikasika ireo karazana mozika naseho tao :
Playing some of the forgotten instruments! What an amazing opportunity to listen to the music of #pakistan  #artlangar  pic.twitter.com/BYcQVCD9hL 
Ny fitendrena ireo karazan-javamaneno tsy fahita intsony! Fotoana mahafinaritra hihainoina mozika avy ao #pakistan  #artlangar  pic.twitter.com/BYcQVCD9hL 
Freeha Shaukat, mpanao gazety tsy miankina iray no nizara ny fitaintainana talohan'ny nanombohan'ilay fetibe:
Tena herinandro nahakivy ahy iny , tahaka ny potika be mihitsy aho mandrapaha henoko santionany tamin'ilay hiran'i @ArtLangar  omaly izay nahafahan'ny olona vitsivitsy notsongaina nandre sy nihira niaraka tamin'ny tarika Arieb Azhar sy Saakin izay hizara lahatsary vitsivitsy hampahatsiahy antsika ny Love Laughter Longing & Beauty of Humans
Nandihy nanditra ny alina tontolo ny olona, fitoniana kely raha oharina amin'ilay korontana ny herinandro talohan'io, tsy mora anefa ny nanomana io hetsika io. “Noho ilay korontana ara-politika nisy, maro ireo nividy tapakila mialoha. Niandry ny fotoana farany kosa izy ireo hijerena raha milamina tsara ny zavatra rehetra,” hoy i Arieb Azhar.
— Aqse Zahra (@Aqseyy) December 4, 2017 
Tiako ny fahasamihafana ao Islamabad. Tsy hoe manaiky ny tsy fitoviana fotsiny ihany ry zareo fa mankalaza izany araka izay fomba mahafinaritra indrindra azo atao ihany koa. #ArtLangar  pic.twitter.com/XbIaaBmGHc 
Saika hanajanona ilay hetsika i Azhar andro vitsy talohan'ny daty voatondro satria tsy nilamina mihitsy ny tanàna, kanefa nanapaka hevitra ny tsy hanao izany. ” Nanosika ahy hanohy hikarakara ilay hetsika hatrany ny ekipako tamin'ny filazan'izy ireo fa io izao no ilain'ny tanàna amin'izao fotoana izao”. hoy izy nanazava.
Fampirantiana ahitàna petakofehy nentim-paharazana mahafinaritra tao amin'ilay Fetiben'ny Zavakanto Langar, Islamabad. Sary nalain'i Annam Lodhi.
Miaraka niombon-kevitra tamin'izany koa ireo tanora an'arivony nanatrika ilay fetibe.”Tena zava-dehibe ny hetsika tahaka itony, manampy amin'ny fiainana ara-sosialy sy mba ahafahana makamaka aina,” Hoy i Laiba, izay nampiranyy ny asatanany.
Ny tapakila tamin'ilay Zavakanto Langar dia nanomboka tamin'ny 500 Rs (4,50 dollara Amerikana) ho an'ny mpianatra ary 1000 Rs (9 dollara Amerikana) ho an'ny sisa, izay no nahafahan'ny mpianatra nanatrika ilay izy. “Mila mieritreritra tsara ianao alohan'ny andehanana aminà hetsika iray raha toa ka lafo loatra ilay izy,” hoy i Soha Azeem, mpianatra iray.
Azo isaina amin'ny rantsan-tànana ny toerana ahafahan'ny mponina ao amin'ireo tanàna roa ireo makamaka aina, toy ny Pakistan National Council of Arts (PNCA) sy ny Lok Virsa. Kanefa na izany aza, tsy mifanaraka loatra amin'izany ireo toerana ireo, raha ny nambaran'i Ammar Khalid, mpikambana ao amin'ny Theatre Wallay, tarika tsy miankina sy mpilalao tantara an-tsehatra izay miady ny mba hisian'ny toerana marmaro kokoa natokana ho an'ny Zavakanto natao ho an'ny daholobe.”Misy loko mazava hita maso mihitsy amin'ny fitontongan'ny hetsika ara-kolotoraly sy ny fiakaran'ny tsy fitsinjovana ny mponina ato amin'ny firenena”, hoy izy
Tena ankasitrahan'ny olona tokoa ny hetsika tahaka ny Zavakanto Langar, izay sady takatry ny fahefa-mividin'ny rehetra no azo antoka, kanefa mbola hiatrika fanamby goavana hatrany nohon'ny politika hay fantarina mialoha ao Pakistana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/31/112119/
 December 4, 2017: https://twitter.com/Aqseyy/status/937620450326335488?ref_src=twsrc%5Etfw